Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny takelaka taratasy PE sy Waxed?
Ny fampiasana fitaovana mety rehefa fonosana dia tena ilaina mba hahazoana antoka fa mandray ny entanao ny mpanjifanao amin'ny fampisehoana mety indrindra. Mety tsy mieritreritra an'izany ianao, fa amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitaovana fonosana tsy mety dia mety hanimba tsy nahy ny fitarainan'ny vokatrao ianao. Fitaovana fonosana roa ...
Fomba fanamboarana savony lovia avy hatrany
Ny maodelin'ny fampiasana dia mifandraika amin'ny sehatry ny fonosana sakafo, indrindra amin'ny firakotra maro sosona fonosana lovia paty. Araka ny fantatsika rehetra, ny paty eo no ho eo dia iray amin'ireo sakafo ilaina indrindra amin'ny fianan'ny zanak'olombelona. Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​ny famolavolana fonosana eo noho eo ...
Ny haben'ny tsenan'ny fonosana aluminium, ny firafitry ny vidiny, ny fanadihadiana ny fitomboana ary ny vinavinan'ny ho avy hatramin'ny 2025
Ny Aluminium Foil momba ny tontolo iainana mankany amin'ny Vavolombelona avo lenta amin'ny safidin'ny mpanjifa fonosana miampy ny lalàna mifehy ny lalàna mifehy dia ny sasany amin'ireo antony lehibe izay misy akony lehibe amin'ny lafiny samihafa amin'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro, anisan'izany ny fonosana, ingredie ...